निधिको समर्थन कोइरालालाई
६. थारू बस्तीमा माघीको रौनक
२७ मंसिर २०७८, सोमबार ११:४१ प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको आज अन्तिम दिन मतदान सुरु भएको छ । युवा पुस्ताको नेतृत्व गर्दै सभापतिका प्रत्यासी रहेका डा. शेखर कोइरालालाई बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको साथ र सहयोग रहेको छ ।
डा. कोइरालाले पहिलो चरणमै ५६ प्रतिशत भन्दा बढि मत ल्याएर नेपाली कांग्रेसको सभापति हुने अन्तिम तयारीका साथ मैदानमा उत्रिएका छन् । पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार सभापतिका अर्का प्रत्यासी विमलेन्द्र निधिले डा. शेखर कोइरालालाई समर्थन गर्दै आफ्ना मतदाता, शुभेच्छुकहरुलाई आन्तरिक सकुर्लर गरेको बताइएको छ ।
निधि निकट एक उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार शेरबहादुर देउवालाई जसरी पनि हराउनु पर्छ र कांग्रेसको गिरेको शाख र प्रतिष्ठा बचाउनु पर्छ भन्दै निधिले आज अन्तिम घडिमा आएर डा. कोइरालालाई जिताउन अभियानमा लागेका हुन् ।
यसका साथै प्रकाशमान सिंहको प्यानलमा उम्मेदवार रहेकी नेतृ सुजाता कोइरालाले पनि डा. शेखर कोइरालालाई जिताउन आफ्ना निकट मतदाताहरुलाई अनुरोध गरेको बताइएको छ । यस्तै देउवा प्यानलमा नाम चढाइएका महामन्त्री डा. शंशाक कोइरालाले आम मतदातालाई कुनै भ्रममा नपरी डा. शेखर कोइरालाको प्यानललाई मतदान गर्न अपिल गरेका छन् ।
यसैगरि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि आफ्नो साथ र समर्थन शेखर कोइरालाको टीमलाई रहेको बताउँदै देश विदेशबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मतदान गर्न अपिल गरेका छन् ।